လူထု မောင်ကာဠု: ညီနေမင်းအကြောင်း+ အသံဖိုင်+ ငွေလွဲစာ+ ခြိမ်းခြောက်စာ
မသိတာတွေကိုမတင်ဘူး သိတာကိုပဲတင်တယ်။မတိကျရင်မတင်ဘူး တိကျမှ အထောက်အထား အချက် အလက်ပြည့်စုံမှတင်တယ်။သက်သေတွေမရှိရင်မတင်ဘူး သက်သေအနေနဲ့ blogger၄ယောက်ရှိ တယ်။အသံဖိုင်ရှိတယ်.. ခြိမ်းခြောက်စာရှိတယ်. ငွေလွှဲထားတဲ့ စာတွေရှိတယ် နောက် chat list တွေရှိတယ်..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ အင်တာနက်သုံးသူတိုင်း Google ကိုသိကြတယ်။ Hacking ကိုလေ့လာသူတိုင်း Blink Hacker Group ကိုသိကြတယ်။ ထို့အတူ နည်းပညာကို လေ့လာသူတိုင်း ညီနေမင်းဆိုသောအမည်ကို သိကြတယ် ။www.nyinaymin.org သည် ကျွန်တော်တော်တို့အတွက် လေ့လာစရာတစ်ပုံတစ်ပင်..........ညီနေမင်း.. ထို အမည် နဲ့ ကျွန်တော် စတင်ရင်းနှီးခဲ့တာက လွန်ခဲ့သည် ၃ နှစ်ခန့်ကတည်းက.... ကျွန်တော်အွန်လိုင်းလော က ကို စတင်လေ့လာစတုန်းကပေါ. ညီနေမင်း ၀ဘ်ဆိုဒ်သည လေ့လာစရာတစ်ပုံတပင်. ကျွန်တော်တို့ အတွက် စာကြည့်တိုက်တစ်ခုနှယ်..ကိုညီနေမင်းသည်လည်း ကျွန်တော်တို့အတွက် လေ့လာဆဲ လူငယ်တွေ အတွက် အားကိုးစရာပင်.......konyinaymin@gmail.com ကိုလည်း အပ်ထားကြသည်။ အဲ့အကောင့် အွန်လိုင်း တက်လာသည်ပင်လျင် မေးစရာတွေ တန်းစီမေးကြသည်ကပင်အမော.....
လွန်ခဲ့သည် တစ်နှစ်ခွဲခန့်က လေကာ့သောင်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ညီအစ် ကိုလိုခင်သော သူတစ်ယောက် နဲ့စကားစမြည်ပြောရင်း ညီနေမင်းအကြောင်းရောက်ဖြစ်သည်.. သူကပြော သည် ညီနေမင်းဟာ အရမ်းမော်ကမာတယ်.. နောက်အသောက်အစားလည်း ခုံမင်တယ်တဲ့.. မိန်းမကိစ္စ လည်းရှုပ်လို့ သူ့မယားကြီးနဲ့လည်း အမြဲတကျက်ကျက်နဲ့တဲ့... စာကိုလည်း ကောင်းကောင်း မသင်ဘူးတဲ့ ပိုက်ဆံသာယူပီးတော့အဖြစ်လောက်သာ သင်သည်တဲ့...... ကျွန်တော်ကတောင် မဖြစ်နိုင်ပါ ဘူးကွာ မလိုတဲ့သူတွေက ပြောကြတာနေမှာပေါ့ဆိုပီးတော့ ခွန်းတုံ့မခံ ပြန်ပြောခဲ့သည်...
ဒါတင်အားမရသေးပဲ ညီနေမင်းဆိုဒ် chat box ထဲမှာ လာဆဲသည့် လူငယ်များကိုပင် ပြန်ဆဲသည်အထိ ညီနေမင်းကို တစ်ချိန်က ထောက်ခံခဲ့ဘူးသည်........။ယခုတော့မူ...........ဒီရက်ပိုင်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့ ခင်မင်ခဲ့မိသည်.. သူ့အကြောင်းတွေ ပြောပြရင်းကနေ ညီနေမင်းဆိုတဲ့ နာမည် ပါလာပြန်သည်... ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတဲ့ နာမည်ဆိုတော့ သူက လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်လလောက်တုန်းက သူ့ရည်းစားပါတဲ့....... အောင်မြတ်လေး မြတ်ချွာဖျား....... ကောင်မလေးက အခုမှ ၁၈ နှစ်ပဲရှိသေးတယ် ညီနေမင်းက ၃၀ပြည့်တော့မယ် အသက်က ခေါက်ချိုးလောက်ကွာနေတယ်..ဒါ့အပြင် ညီနေမင်းက မိန်းမနဲ့ မိန်းမကလည်း ကိုယ်ဝန်နဲ့လို့ကြားထားတယ်. ဟုတ်ပါ့မလားဆိုတော့ သင်္ကြန် မှာ တောင် လက်ထပ်ကြမလို့ စီစဉ်ထားတာတဲ့ဗျာ.. ကျွန်တော်များ နားကြားမှားသလားအေ.. မယုံဘူး ဆိုတော့ ကောင်မလေးက အသံဖိုင်တွေပို့ပေးသည်.. ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ ၃နာရီကျော်တယ်ဗျ.. နောက်ပြီးတော့ ညီနေမင်းရဲ့အသံကိုလည်း ကျွန်တော်ကြားဖူးသားပဲ ညီနေမင်း ရန်ကုန်ရောက်တုန်းကတောင် ကျွန်တော် ဖုန်းဆက်လိုက်သေး ။သူ့အသံ မှ သူ့အသံစစ်စစ်ဗျ.. နောက်တော့ကောင်မလေးက password ပါပြ သည် အောင်မငေး.. မြတ်ချွာဖျား.... နည်းတဲ့ချက်တွေလားအေ.. ××××××××××××
konyinaymin@gmail.com အဲ့အကောင့်တွေနဲ့ ချက်ထားတာတွေဗျ.. Pastebinကနေ ကူးထားကြောင်း...
တစ်ချို့ အသုံး အနှုန်းတွေက ယောင်္ကျား နဲ့ မိန်းမလို့တောင် ခေါ်ကြတယ်ဗျာ... ရက်စက်ပါ့ပေ ယောင်္ကျား မိန်းမ ဆိုပါလားအေ.. နောက် ပိုက်ဆံလှမ်းပို့ခိုင်းတာတောင်ပါသေးဗျာ... အသံဖိုင်တွေကလည်း နည်းတာ မဟုတ်.. chat တွေလည်းရှိသေး... ညီနေမင်းက ဘာဖြစ်လို့ သမီးကို ထားသွားခဲ့ ဖြတ်သွားခဲ့ တာလည်း ဆိုတော့ မသိပါဘူးတဲ့..
. သူဘာမှလည်းမလုပ်ပါဘူးတဲ့ဗျာ...ကောင်မလေးကလည်းတော်တော်ချစ်ရှာပါတယ်... ကျွန်တော့ဆီ ဖုန်းဆက်တာတောင် ငိုနေသေးတယ်... ညီနေမင်း ထားရစ်ခဲ့တာတောင် ဖုန်းဆက်သေးတယ်ဆိုပဲအခုဆို ညီနေမင်းက သူ့ဖုန်းတွေကို black list လုပ်ထားတယ်ဆိုပဲအေ... ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုလုပ်မယ်ဆို တာတောင်မှ အရမ်းကို ထိခိုက်နစ်နာသွားအောင်မလုပ်ပါနဲ့တဲ့.. တစ်ခြားမိန်းကလေးတွေ သူ့လိုမခံစား ရအောင် မကြုံတွေ့ရအောင်သာ အသိပညာပေးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲ တင်ပါတဲ့.. အာဂ မိန်းကလေးပါပဲ လား.. လေးစားတယ်ဗျာ..။ (မတန်လို့ ကံက ဖယ်လိုက်တယ်မှတ်ပါသမီးရယ်..)
တကယ်ဆိုရင် ဒီကိစ္စမှာ ညီနေမင်းဘက်က လုံးလုံးမှားခဲ့တယ်.. ကောင်မလေးဘက်ကတော့ နည်းနည်းမှား ခဲ့တယ်.. ကောင်မလေးက ဘာတွေမှားလဲဆိုတော့ ညီနေမင်းကိုအရမ်းယုံကြည်ခဲ့တယ်.. အားကိုးမိခဲ့တယ် ချစ်ခဲ့မိတယ်.. အဲ့ဒါတွေကမှားခဲ့တယ်.. ညီနေမင်းဟာ နာမည်ကြီး ဘလော်ကာတစ်ယောက် လူတိုင်းက ချစ်ခင် အားကိုး လေးစားရတဲ့လူတစ်ယောက်.. ဒါပေမဲ့ အဲ့ယုံကြည်လို့ ပုံအပ်ခဲ့တာတွေကို အလွဲသုံးစား လုပ်ခဲ့တယ်..ပိုက်ဆံတွေပါ ပို့ခိုင်းခဲ့တယ်... ဘယ်လောက်ပဲ တော်တော် ဘယ်လောက်ပဲ နာမည်ကြီးကြီး ဘယ်လောက်ပဲ ဆန္ဒရှိရှိ ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ထိန်းထားသင့်တယ်.. ညီနေမင်းဟာ သားမယားရှိတဲ့သူ (မယားကလည်း ကိုယ်ဝန်နဲ့ အခုလည်း မယားကို ကပ်ကြေးနဲ့ထိုးလို့ ဆိုပီးတော့ အမှုရင်ဆိုင်ရဦးမယ်.). အသက်ကလည်းခေါက်ချိုးလောက်ကွာတယ်. တကယ်ဆို အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့ ၁၈ နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး က ရည်းစားစကား စပြောမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ငြင်းဆန် ခဲ့ရမယ့်သူ ဒါကို သူက စပီးတော့ကောင်မလေးကို ရည်းစားစကားစပြောခဲ့တယ်.. တကယ်ဆို မဖြစ်နိုင် တဲ့ကိစ္စတစ်ခုကို မစခဲ့သင့်ဘူး.. ဘ၀တစ်လုံးနဲ့ သက်ဆိုင် တဲ့ စကားတစ်ခုကို အခုလိုလွယ်လွယ်နဲ့ မပြောခဲ့ သင့်ဘူး.. လွယ်လွယ်နဲ့ပြောခဲ့တယ် ဆိုရင်တောင်မှ သူ့သိက္ခာနဲ့ အဆုံးထိ တာဝန်ယူသွား၇ မယ့်ဟာကို အခုတော့ လွယ်လွယ်နဲ့ပဲ စွန့်ပစ်ခဲ့ တယ်....လွယ်လွယ်နဲ့ထွက်ခဲ့တဲ့သူ့စကားလုံးတွေကို သူတာဝန်မယူ နိုင်ခဲ့ပါလား... ဆန္ဒကို သိက္ခာနဲ့ ထိန်းပါဗျာ..
ကျွန်တော် ဘာကြောင့် ဒီအကြောင်းတင်ရတာလဲဆိုတော့ ဒီလောက်တောင်ရှင်းပြနေရတာလဲဆိုတော့ ဒီခေတ်ဟာ နည်းပညာခေတ် နည်းပညာသများတွေ ခေတ်ကောင်းတဲ့ခေတ် နည်းပညာသမားဆို လူတိုင်းက ယုံကြည်နေကြ အားကိုးနေကြ လေးစားနေကြတဲ့ ခေတ်ကိုးဗျ.. ဒီလို အားကိုးယုံကြည့် ချစ်ခင်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ နည်းပညာသမားတွေကို လူတိုင်းလေးစားနေကြတယ်.. အဲ့လိုခေတ်ကြီးမှာ ညီနေမင်းတို့လို နည်းပညာသမားတွေက သူတို့ရဲ့ ပညာအပေါ် ခုတုန်းလုပ်ပြီးတော့ မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ကို ပြောချင်ရာပြော လုပ်ချင်တာလုပ်ဆိုချင်တာဆို ဖြစ်မှာကြောက်လို့ အခုလိုဖြစ်သွားတဲ့ ညီမလေး အကြောင်း ကိုတွေကိုပြန်လည်မျှဝေရင်းနဲ့ တစ်ခြားမြန်မာမိန်းကလေးတွေပါ သိစေချင်လို့ သတိထား နိုင်အောင်လို့ ရှောင်ရှားနိုင်အောင်လို့ အမုန်းခံပြီးတော့မျှဝေလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်...
××××2910768346 အဲ့ဒါဘဏ်အကောက် အကို ရက်စွဲ 2.10.12 2000 ပီတော. 16.10.12 က 1500 သူတောင်းဒါပါ သမီါ်.. ကူညီချင်လို့မဟုတ်ပါဘူး သူက ပြောတဲ့ ရနောင်းရောက်နေလို့ ပိုက်ဆံ မပါခဲ့ဘူးပြောလို့ သမီး လွဲပေးလိုက်တာပါ ဘဏ်နာမည်က bankok bank ပါ နာမည်က MR.AKKARATSR အကို 8.10.12 တုန်းက 1000ထပ်လွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ voip သမီး သူငယ်ချင်းတယောက် လုပ်ခိုင်းခဲ့ဒါပါ အဆင်မပြေလိုက်ပါဘူး သူငယ်ချင်းလဲ မသုံးဘယ် မယူတော.ဘူးပြောလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့သူဇာ သူငယ်ချင်းကပြောပါသေးတယ် သမီးမှာပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ကိစ္စ နဲ့ သူက ရိပ်မိတော. ညီနေမင်း စိတ်က စမ်းဒါ သူ ပြန်မယူပါဘူး အဲ့ဒီ Voip အကောက်ကို သူဇာခုဝင်ဒါမရတော.ဘူး နာမည်က shwethiri ပါတ်ဝတ်က nyinaymin ပါ အဲ့အကောက်က တဖက်မှာလိုင်းရှိရင် ကြိုက်တဲ့နိုင်ငံ နဲ့ ခေါ်လို့ အောင်လုပ်ထာပါတယ် ပီတော.မလေး နပတ်နဲံပါ သူရည်းစာက မလေးမှာဆိုတာ သူက သက်သာတယ်ဆိုလို့ သမီးးညီနေမင်းကို အကူညီတောင်းလိုက်ဒါပါ ဘတ် 1000 ပေးရတယ်(မှတ်ချက်- စုစုပေါင်း ဘတ် ၃၅၀၀ မြန်မာငွေ တစ်သိန်းကျော် ညီနေမင်းယူသွားကြောင်း.. တစ်ခြား ဖုန်းကဒ်တွေလည်း ထည့်ခိုင်းကြောင်းပါ..)
ဒါကတော့ ခြိမ်းခြောက်ထားတဲ့ စာတွေပါ.......
2013/1/25 Black Eyes <nyinaymin.me@gmail.com>
မင်းအဖေရဲ့ မေးလ်နဲ့ ဖုန်းကို ငါရထားတယ် .. ဘုရားသုံးဆူက ညီ ၂ ယောက်ကိုလဲ လာကြိုခိုင်းထားတယ်. မင်းလုပ်တာတွေ . မင်းသူငယ်ချင်း ကိစ္စတွေ မင်းအင်တာနက်က ကိစ္စတွေ ငါအကုန်လုံးကို သိမ်းထားတယ် .. ငါမသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာပဲ ရှိတယ် .. အခုမင်းက ကို့ကို တမင်အရှက်ခွဲတာ ဆိုတော့ စောင့်နေ လိုက် ၂ ရက်လောက်ပဲ .. ကိုလာခဲ့မယ် ဟုတ်ပြီလား ... မင်းနဲ့ဖုန်းစပြောတဲ့အချိန်တုန်း တည်းက ပြောခဲ့တဲ့ ဟာတွေ ဖုန်းထဲမှာ မှတ်ထားတယ် .. အဲ့ကိစ္စကို မင်းက စတာလား ကိုကစတာလား စဉ်းစားကြည့်ပါ .. ကိုမင်းအဖေကို ဖုန်းဆက်ပြီး မပြောချင်ဘူး. အရာမထင်မှာစိုးလို့ ... ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့ ရှင်းမယ် .... ခု ခရီးစဉ်အားလုံးကို ဖျက်လိုက်ပြီ ....
မင်း ကို့အကြောင်း မသိသေးပါဘူး ခင်သူဇာလွင်ရယ် ဆက်ပြီးစုံစမ်းပါဦး ... ၂၀၁၁ ထဲက ကို့မှာ ဘာ အနှောင် အဖွဲ့ မှ မရှိခဲ့ဘူး ... ပြီးခဲ့တာကို အတိတ်မှာထားခဲ့တယ် .. မင်းသိအောင်ထပ်ပြောပြရရင် ကွာရှင်း ထားတဲ့ သတင်းစာယူဦးမလား ... ငါပို့ပေးလိုက်မယ် .. မင်းပေ့ခ်ျမှာ မင်းတင်ချင်တာ တင် . အေးတစ်ခုပဲ ငါ့ကို အရှက်ခွဲတဲ့ ကိစ္စအတွက် မင်းအဖေနဲ့ ငါနဲ့ ဆွေးနွေးကြတာပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား ... မင်းဘယ်လို မျိုးလဲဆိုတာ မင်းအဖေ ပိုသိမှာပါ ... ငါမင်းကို သွန်သင်ခဲ့တယ် ဆုံးမပေးခဲ့တယ် . လမ်းကြောင်း မှန်ပေါ်ရောက်အောင် ဆွဲတင်ပေးခဲ့တယ် . ဒါကို မင်းက ကျေးဇူးဆပ်လိုက်တာလား .. ၀ဘ်ဆိုက်မှာ သီရိနဲ့ ပါတ် သက်ပြီး အကူအညီတောင်းထားတာတွေ ငါလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အပြင် .. မင်းပုံတွေ အင်တာနက်မှာ ပျံ့သွား တာကောသိလား မင်းရယ် သီရိရယ် တွဲပြီးရိုက်ထားတာတွေ .. ဒီကိစ္စနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုတွေ လုပ်ပေး ခဲ့သလဲ... ကို အမှတ်တရ သိမ်းထားပါသေးတယ် ... ဒေါက်တာချက်ကြီးမှာ သီရိပုံတွေ ပါတာတော့ ငါထပ်ပြီး မလုပ်ပေးနိုင်တော့ဘူး ... ဒါပေမယ့် ငါမလာနိုင်ဘူး ဆိုရင်တောင် မင်းအဖေနဲ့တော့ ဖုန်းပြောဖြစ်မှာပါ .... စိတ်မပူပါနဲ့ .
ဒါက ကောင်မလေးနောက်ဆုံး ညီနေမင်းကို ငိုပြီးပြောနေတဲ့ အသံဖိုင်း
အသံတိုတ်စစ်လို့ရအောင် ယူတုမှ ဒီကောင်ပြောထားတဲ့ ဗွီဒီယို
(မှတ်ချက်.. နာမည်များကို ကာရကံ၇ှုင်ရှဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကြောင့် တစ်ခြားနာမည်များအဖြစ်လွှဲထားကြောင်းပါ..)
ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ပါ.. ပီး၇င် Share ဖြစ်အောင်လည်း share သွားပါခင်ဗျား.. တစ်ခြား မြန်မာ မိန်းကလေးတွေ ရှောင်ရှားနိုင်အောင်လို့ပါ.... Share ဖို့အချိန်ရှိတုန်း ရှဲလို့ရတုန်း ရှဲသွားပါ..ခင်ဗျားတို့ရဲ့ နှမတွေ ဆွေမျိုးတွေ ဒီလိုဖြစ်သွားတော့မှ ဓါးဆွဲပီးတော့ လိုက်လို့ပဲရတော့မယ်..
ပေးပို့လာသူ---> Patriotic Comrade
ရေးသူ လူထု မောင်ကာဠု အချိန် 03:12